အချစ်နှင့်ဘဝ Archives - Channel Lover
လက္မထပ်ခင် အပျိုစင်ဘဝကို ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ …
February 22, 2022 by Channel Lover
လက္မထပ်ခင် အပျိုစင်ဘဝကို ပေးပြီးတဲ့နောက္မှာတော့…(ဖြစ်ရပ်မှန်လေးပါ) အ စဆုံးဖတ်ပြီး နှမချင်း ကိုယ်ချင်းစာတယ်ဆိုရင် မျှဝေပေးပါ …။ “ဟင့်အင်း မောင်” မလိုက်လျော ပါရစေနဲ့ ”မောင်” ချစ်ကလည်းကွာ….”မောင်က ချစ်ကို တကယ်ချစ်တာပါ ကွာ..”“ဟင့်အင်း မောင်” ကျမတို့ မိန်းမသား ဘဝမှာ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ အပျိုစင် ဘဝလေးကိုတော့ လက်မထပ်ရသေးပဲ မပေးဆပ်ပရစေနဲ့လား “မောင်”..တသက်လုံး တန်ဖိုးထားတဲ့ အပျိုစင် ဘဝလေးကိုတော့ မလိုချ င်ပါနဲ့အုံး နော်..မောင်…” ”တောက်စ်..” မင်း ငါ့ကို ချစ်တယ်ဆိုတာ ဒါလားကွာ ချစ်သူတွေ ဖြစ်ပြီး မင်း ငါ့ အပေါ် ဒီလောက်တောင် မလိုက်လျော ပေးနိုင်ဘူးလားမင်း ငါ့ အပေါ် တကယ်ချစ်တာရော ဟုတ်ရဲ့လားTalky တွေကို ကြည့်ထားနော် ရှုပ်နေတယ်/“မောင် ရယ်” … Read more
မိန်းကလေးတိုင်း ရှောင်ရှားရမယ့် ယောက်ျား (၈) မျိုး …
February 19, 2022 by Channel Lover
မိန်းကလေးတိုင်း ရှောင်ရှားရမယ့် ယောက်ျား (၈) မျိုး … ရည်းစားတစ်ထောင်၊ လင်ကောင်တစ်ယောက် ဆိုတဲ့ စကားပုံ ကြားဖူးပါတယ်။ အမျိုးသမီးများ ရည်းစားတစ်ထောင်ထားရမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးရဲ့ အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိသေးခင်မှာ အချစ်ကို ယုံပြီး ဘဝကို မပုံအပ်သင့်ပါဘူး။ အချစ်ဦးဆိုတာ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ဇာတ်လမ်းထဲမှာ အလွန်လှပသလောက် တကယ်ညားသွားရင် သာယာတာက နည်းပါတယ်။ ဘယ်လိုယောက်ျားမျိုးကို အိမ်ထောင်ဘက်အဖြစ်ရွေးချယ်သင့်ပါသလဲဆိုတာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အကြိုက်ချင်းမတူကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အောက်ပါအကျင့်များငြိစွန်းနေတဲ့ ယောက်ျားများကိုတော့အိမ်ထောင်ဘက်ရွေးခဲ့ရင် ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ ၁။ ကပ်စေးနှဲလွန်းတဲ့ ယောက်ျား၊အရပ်စကားနဲ့ နှပ်ချေးလို့လည်းခေါ်တာကြားဖူးပါတယ်။ ဒီလိုယောက်ျားမျိုးနဲ့ အတူတူ ဆိုင်မှာ တစ်ခုခုစားရင် ပိုက်ဆံပေးဖို့ လက်တွန့်တတ်တာကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ သူဟာဘယ်လောက်ချမ်းသာတယ်။ ဘယ်လို Brand တွေကို ဝတ်ဆင်တယ်စသည်ဖြင့် သိသိသာသာဖြစ်ဖြစ်၊မသိမသာဖြစ်ဖြစ် ကြွားတတ်ပေမဲ့ … Read more
ဒီပုံလေး ကို တစ်ချို့က လှောင်နေ၊ ပြောင်နေကြလို့ ဖတ်ကြည့်ပေးပါ…
February 15, 2022 by Channel Lover
ဒီပုံလေး ကို တချို့က လှောင်ခဲ့ကြတယ်ဘာလို့များ ရီစရာ ထင်နေကြတလဲဗျာ😢 ကျတော့်ကတော့ ဒီပုံလေးကို သိပ်သဘောကျတယ် သူတို့လေးတွေလည်း အားလပ်ရက်မှာ ပျော်ရွင်နေကြတာလေ ကလေးလေးကို ချီပြီး ဘယ်အရွှယ်မဆိုအချစ်ကို ထိတွေ့ခွင့်ရှိပါတယ် အချစ်နဲ့တွေ့ရင် လူတွေက နုပျိူသွားကြတာပါပဲ ကြည်နူးစရာလေး အချစ်မှာ ပျိူတယ် အိုတယ် မရှိပါဘူး ချစ်ခြင်းတွေက သိပ်ကို ချိူမြိန်ပါတယ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ သိပ်ကိုလှပလွန်းပါတယ် ကျတော်ကတော့ အချစ်ကို နွေးထွေးမူတစ်ခုလို့ မှတ်ယူထားတယ်. . ဒီပုံလေးကိုကြည့်ပါဦး ဘယ်လောက်နွေးထွေးစရာကောင်းလဲ တွဲလက်တိုင်းမြဲကြပါစေ ချစ်သောသူတိုင်း ပေါင်းဖက်နိူင်ကြပါစေ ဗျ credit unicode ဒီပုံလေး ကို တခြို့က လှောငျခဲ့ကွတယျဘာလို့မြား ရီစရာ ထငျနကွေတလဲဗြာ😢 ကတြေျာ့ကတော့ ဒီပုံလေးကို သိပျသဘောကတြယျ သူတို့လေးတှလေညျး အားလပျရကျမှာ ပြျောရှငျနကွေတာလေ ကလေးလေးကို … Read more
အမျိုးသားအားလုံးလိုလိုဟာ လူပျိုဘဝကို အစောကြီး ဆုံးရှုံးတတ်ကြတယ်လို့ အများစုက ယူဆကြသည့်တိုင်အသက် ၂၅၊ ၃၀ ထိတောင် ဖိုမကိစ္စမစမ်းသပ်ဖူးတဲ့ အမျိုးသားတချို့ရှိနေတယ် ဆိုတာပါပဲ သူတို့လည်း သူ့အကြောင်းပြချက်နဲ့သူ ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ကိုယ်ဒိတ်လုပ်တဲ့ ကောင်လေးဟာ လူပျိုစစ်မစစ် သိချင်တယ်ဆိုရင် ခန့်မှန်းသိရှိနိုင်မယ့် လက္ခဏာရပ်တချို့ရှိပါတယ်။ တခါတရံ ခန့်မှန်းချက်တွေ လွဲကောင်းလွဲပါလိမ့်မယ်။ လူပျိုစစ်မစစ် သူသာအသိဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိချင်စိတ်ပြင်းပြနေသေးတယ်ဆိုရင် လူပျိုစစ်စစ်တွေ ပြုမူတတ်တဲ့ ကိုယ်အမူအရာတချို့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူပျိုစစ်စစ်ဖြစ်တယ်၊ မဖြစ်ဘူးဆိုတာနဲ့ သူ့အချစ်ရေးအဆင်ပြေမှုရှိတယ် မရှိဘူးဆိုတာကတော့ လုံးလုံးမသက်ဆိုင်ကြောင်း သိထားသင့်ပါတယ်။ ဒီတော့ လူကောင်းဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာ သူ့အတွေ့အကြုံရှိမှု သို့မဟုတ် မရှိမှုပေါ် မူတည်ပြီးတော့ မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့။ မိမိတို့အချစ်ရေးဆက်ဆံမှုရဲ့ အနှစ်သာရကို အဓိကထားကြည့်ပါ…. ၁။ သင်နဲ့ တခြားမိန်းကလေးတွေနားရောက်လို့ သူအရမ်း ရှက်နေတယ်၊ မတော်တဆ … Read more
ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ပက်သက်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေကြား လှောင်ပြောင်ခြင်းခံရ၍ အားကစားရုံမှာ စာရင်းသွင်းပြီး Gymသွားဆော့ခဲ့လိုက်ရာ နည်းပြဆရာနှင့်ပါ ချစ်မိသွားသော မိန်းကလေး
February 12, 2022 by Channel Lover
အချစ်ဆိုသော အရာသည် အလွန်ဆန်းကြယ်လှပြီး ကိုယ့်ရဲ့ဖူးစာမှန်ပါကလည်း မည်သည့်အခြေအနေမျိုးမဆို အကြောင်းအမျိုးမျိုးတိုက်ဆိုင်ကာ ဆုံတွေ့တတ်ကြသည်။ ယခုတွင်လည်း ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ အသက်၂၄နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦးသည် သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် မလှပမှုကြောင့် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပြင်ထွက်တွေ့တဲ့အခါ အမြဲလိုလို လှောင်ပြောင်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် မိန်းကလေးသည် သူမခန္ဓာကိုယ် စမတ်ကျကျ လှပနေဖို့ရာအတွက် ပြောင်းလဲပစ်ရန် မြို့ထဲရှိ နာမည်ကြီး အားကစားရုံတစ်ခုမှာ စာရင်းသွင်းကာ Gymသွားဆော့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် အသက်တူရွယ်တူ နည်းပြဆရာနှင့် တွေ့ရှိကာ ထိုအမျိုးသားလေးရဲ့ တောင့်တင်းလှသော ခန္ဓာကိုယ် ကြွက်သားအလှ 6-packsတို့ကြောင့် မြင်မြင်ချင်း စိတ်ဝင်စားသွားခဲ့မိသည်။ နည်းပြဆရာကလည်း သူမအပေါ်တွင် ဂရုတစိုက်နဲ့ သေသေချာချာ လေ့ကျင့်ပေးရင်း တစ်လခွဲအကြာတွင် ချစ်ရေးဆိုခဲ့ပြီး မိန်းကလေးမှ ဟင်းမချက်တတ်သောအခါတွင် အိမ်ထိကိုယ်တိုင်ဟင်းချက်ပြီး ပို့ပေးခဲ့တာကြောင့် အရမ်းအချစ်ခံနေရ၍ သူငယ်ချင်းတွေကပင် အားကျခဲ့ရသည်။ Hlaing … Read more
အချစ်ကို ကိုးကွယ်ခဲ့လို့ မှားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ နေတိူးရီးစားဟောင်း ပန်ပန်ရဲ့ ရုပ်သံ
February 10, 2022 by Channel Lover
အချစ်ကို ကိုးကွယ်ခဲ့လို့ မှားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ နေတိူးရီးစားဟောင်း ပန်ပန်ရဲ့ ရုပ်သံ ပရိတ်သတ်ကြီးတို့ရေပန်းပန်ကတော့ ၂၀၀၀ ခုနှစ်ဝန်း ကျင်က အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကြော်ငြာတွေ၊ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားတွေမှာ ပါဝင်သ ရုပ် ဆောင်ခဲ့ဖူးသူတစ်ယောက်ပါ။ သူမရဲ့ ကျန်းမာရေးကြောင့် အနုပညာအလုပ်တွေ ရပ် နားခဲ့သလို ပရိသတ်တွေနဲ့လည်း အဆက်ပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ လပိုင်းတွေလောက်က ပန်းပန်နဲ့နေတိုး တို့ရဲ့ ပုံတွေပြ့န်လာခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြပါတယ်။ ပန်ပန်ကတော့ ပြီးပြီးသားကိစ္စတွေ မေ့ပြစ်ခဲ့တာ ကြာပါပြီလို့ ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပန်းပန်က ““အချစ်ကို ကိုးကွယ်မိလို့ အနုပညာအ လုပ်ကို သေချာ မလုပ်နိုင်ဘဲ အလှမ်းဝေး ခဲ့ရတယ်။ လူဆိုတာ အမှားတွေ၊ အခက်အခဲတွေ ကြုံလာမှ နော က်ပိုင်းကျရင် ဆင်ခြင်နိုင်မယ့် သင်ခန်းစာရတာပါ။ … Read more
ပိုငျရှငျရှိတာ သိရကျနဲ့ ဇှတျတိုးခငျြတဲ့|သူတဈပါး ရဲ့ ခဈြခွငျးကို လုယူခငျြတဲ့ သူတှေ ဖတျစခေငျြတယျ
February 8, 2022 by Channel Lover
ပိုင်ရှင်ရှိရင် ရှောင်ပါသူတစ်ပါးပိုင်ဆိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုကို ပိုင်ရှင်မပေးပဲယူ ချင်စိတ်ရှိသူဟာ သူခိုးစိတ် ရှိတဲ့ သူပဲ။ ကိုယ်ဘယ်လောက်ပဲ ကြိုက်နေပါစေဘယ်လောက် ပဲ လိုချင်နေပါစေပိုင်ရှင်မပေးပဲ မယူရဘူး မထိရဘူး မကိုင်တွယ်ရဘူး ။ ယူမိတယ် ပြစ်မှားမိတယ်ဆိုရင် အဲ့တာဟာ ခိုးမှုမြောက်တာပဲ။တစ်ချို့ တွေက စည်း မထားကြဘူး ပြောမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ချင်းစာမှု မရှိကြဘူးပေါ့။ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာဖို့နဲ့ စိတ်သာယာဖို့ အတွက်နဲ့ သူတစ်ပါး ရဲ့ ချစ်ခြင်းကို လုယူချင်တဲ့ စိတ်ရှိကြတယ်။ ပိုင်ရှင် ရှိမှန်းသိရက်နဲ့ သူငယ်ချင်း မို့ အရမ်းခင်တဲ့ မိတ်ဆွေမို့ပါ ဆိုပြီး လိုတာထက်ပိုပြီး အတင်းတွယ်ကပ်နေပြီး အခွင့်အရေး တွေယူနေတာဟာ သူတစ်ပါး ရဲ့ အချစ်တွေ ကို ခိုးယူချင်နေတယ်လို့ပဲ သတ်မှတ်တယ်။ သူ့ရဲ့အနားမှာ ပိုင်ရှင်ရှိတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ကတည်းက အပြင်မှာ လူချင်းပဲ … Read more
လက်သန်းကြွယ်မှာ စပ်စေ့လက်စွပ်ဝတ်ဆင်ရခြင်းရဲ့ အကြောင်းအရင်းအမှန်….
February 4, 2022 by Channel Lover
လက်သန်းကြွယ်မှာ စပ်စေ့လက်စွပ်ဝတ်ဆင်ရခြင်းရဲ့ အကြောင်းအရင်းအမှန်…. တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာလေးပါပဲ လက်ထပ်မင်္ဂလာပြုလုပ်ခြင်းဟာ ချစ်သူနှစ်ဦး တစ်သက်တာ ပေါင်းဖက်ဖို့ရည်ရွယ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအခမ်းအနား လေးတွေမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အမှတ်တရအမြဲတမ်း ရှိနေမယ့် အထိမ်း အမှတ်လေးအဖြစ် လက်စွပ်ကလေးတွေ အပြန်အလှန်ဝတ်ဆင်ပေးကြလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလိုလက်စွပ်လေး တွေကိုတော့ သတို့သား သတို့သမီးတိုင်းဟာ လက်သန်းကြွယ်မှာ ဝတ်ဆင်ကြပါတယ်။ လက်ငါးချောင်းရှိတဲ့အထဲကမှဘာကြောင့်လက်သန်းကြွယ်မှာ ဝတ်ဆင်ကြတာလဲဆိုတာ စဉ်းစားစရာတစ်ခုပါပဲ။ အကြောင်းအရင်းကတော့ဒီလိုပါ။ သင့်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုပူးလိုက်ပါ ပြီးရင် လက်ခလယ်နှစ်ဖက်ကို ကွေးချပြီး လက်ဆစ်ခြင်း ထိကပ်ထားလိုက်ပါ။ ဒီလိုလုပ်လိုက် မယ်ဆို ဘယ်ဖက်လက်မနဲ့ ညာဖက်လက်မဟာ လက်ထိပ်ချင်း ထိကပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး ကျန်သုံးချောင်းကလည်း ထိုနည်းတူပဲ လက်ထိပ်ကလေးတွေ ထိကပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးထင်သာ မြင်သာဖြစ်အောင် ပုံလေးနဲ့တကွပြပေးထားတယ်နော်။ ဒီလိုအနေအထားတစ်ခု ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် လက်စွပ်လေးတွေကို ဘာကြောင့်လက်သန်းကြွယ်မှာဝတ်သလဲဆိုတာ စတင်ရှင်းပြ ပေးဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။ … Read more